Ahoana no nanamboarako dolara an-tapitrisany tamin'ny orinasa B2B niaraka tamin'ny horonantsary LinkedIn | Martech Zone
Alakamisy, Desambra 10, 2020 Alakamisy, Desambra 10, 2020 Jackie Hermes
Nahazo ny toerany mafy ny horonan-tsary ho iray amin'ireo fitaovana marketing manan-danja indrindra, miaraka amin'ny 85% amin'ny orinasa fampiasana horonantsary hahatratra ny tanjon'ny marketing. Raha mijery marketing B2B fotsiny isika, 87% amin'ireo mpivarotra horonan-tsary nanoritsoritra ny LinkedIn ho fantsona mahomby hanatsarana ny tahan'ny fiovam-po.
Raha tsy manararaotra an'io fotoana io ny mpandraharaha B2B, dia diso fatratra izy ireo. Tamin'ny alàlan'ny fananganana paikady fanamarihana manokana mifototra amin'ny horonantsary LinkedIn, afaka nampitombo ny orinasako hatramin'ny tapitrisa dolara mahery aho nefa tsy nisy famatsiam-bola.
Mihoatra ny fenitra ny famoronana horonantsary mahomby ho an'ny LinkedIn toro-hevitra amin'ny horonan-tsary momba ny marketing. Ny horonantsary LinkedIn dia mila foronina sy hohavaozina manokana ho an'ny lampihazo mba hahatratrarana ny mpihaino marina ary hisy fiatraikany marina.
Ity ny zavatra nianarako (sy izay tiako ho fantatra) momba ny fampiasana ny horonantsary LinkedIn hananganana orinasa B2B.
Valiny mitondra fiara
Nanolo-tena hampiakatra aho ny lalao video LinkedIn roa taona lasa izay. Nifanaraka tamin'ny famoronana horonan-tsary ho an'ny lahatsoratry ny orinasa aho, saingy vaovao tamiko tanteraka ny marika manokana. Nieritreritra aho fa ny famoronana horonantsary LinkedIn dia mitaky mijoro miaraka amin'ny fihetsika tonga lafatra manoloana ny solaitrabe ary manalabaraka (mazava be soratra) fahalalana anaty marketing. Navadiko ny paikadiko ary nanomboka namorona horonan-tsary tsy dia tsotra loatra aho miresaka fotsiny momba ireo faritra amin'ny indostria fantatro sy tiako.
Raha tokony hifantoka amin'ny fivarotana ny orinasako aho dia nifantoka tamin'ny fitondrana zava-dehibe sarobidy ho an'ny mpihaino ahy. Nanohy namorona horonan-tsary bebe kokoa aho, nametraka ny tenako ho manam-pahaizana momba ny lohahevitra momba ny varotra, orinasa, fitantanana ary fandraharahana. Tamin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra sy ny fifandraisana tsy tapaka dia nampitomboiko ny mpihaino ahy tato anatin'ny volana vitsivitsy: nahatratra 70,000 XNUMX ny mpanaraka azy ankehitriny!
Ny pivot ny paikadiko horonantsary (sy ny fahavonako hanana manokana manokana) dia nandoa tamin'ny endrika fitarihana taonina vaovao. Amin'ny alàlan'ny fametrahako ny tenako any ivelany sy hiresahako ny fiainako dia hahafantaran'ny olona ahy aho, hanatona azy ireo raha mieritreritra izy ireo fa mety hiara-hiasa aminay, ary mandeha haingana ny varotra. Tamin'ny fotoana nanombohan'ny fitsidihan'ireto LinkedIn nitsidika ny tranokalan'ny orinasan'ny orinasako ireto na nanatona ahy izy ireo dia efa fitarihana mafana. Hatramin'izao, ny orinasako dia nanao sonia fifanarahana maherin'ny iray tapitrisa dolara avy amin'ny fitarihana izay avy amin'ny LinkedIn.
Na dia manana fanampiana avy amina ekipa mahafinaritra iray mikolokolo ireo fitarihana ireo aza aho, ny taranaka mitarika dia dingana voalohany lehibe — ary mila paikady video lehibe LinkedIn.
Mitantara tantara hita maso
Ny horonan-tsary LinkedIn dia fomba tsara holazaina tantara maharesy lahatra momba ny marika manokana sy ny orinasanao. Na dia tsara aza ny endrika roa dia matetika ianao no mampita bebe kokoa momba ny marikao amin'ny horonan-tsary iray noho ny azonao tao amin'ny lahatsoratra bilaogy.
Ny lanjan'ilay horonantsary dia miankina amin'ny zavatra azonao ampitaina amin'ny endrika maso sy re. Mamela ny olona hifandray aminao ny horonan-tsary ary hahafantatra anao mihitsy aza satria afaka manangona vaovao avy amin'ny fiteninao sy ny fomba fiteninao izy ireo. Betsaka ny olona no nilaza tamiko fa mahatsapa ho efa fantany aho amin'ny fijerena ireo horonantsary zaraiko ao amin'ny LinkedIn.
Ny hafatra mitovy amin'izany dia azo raisina amin'ny fomba hafa tokoa rehefa henonao ny feon'ny mpandahateny sy ny fihetsem-pony. Ny haino aman-jery sosialy no ivon'ny lahatsoratra an-tsoratra mahatsikaiky, saingy mahatsiaro tena ho marina kokoa ny horonantsary. Ny video koa dia manao ny maha-olona ny "reel highlight" lasa media sosialy. Tsy maintsy mihinana somary manta ianao, tena misy marina kokoa hizaranao horonantsary — lesona iray izay nianarako tsy tapaka tamin'ity taona lasa ity raha naka sary horonan-tsary niaraka tamina ankizy telo nianatra avy tao an-trano tao aoriana.
Fambolena ny mpihaino anao mety
Ireo fomba fanao tsara indrindra ampiharintsika amin'ireo fantsom-barotra hafa dia mihatra eto ihany koa; izany hoe tokony hanana tetika stratejika momba ny mpihaino anao ianao, ary tokony hanome ny olona antony hikarakarana azy ireo.
Raha te hieritreritra isika fa ny fametrahana harato malalaka dia hitarika fitarihana betsaka kokoa, fantatsika fa tsy marina izany. Mila fanahy iniana momba ny mpihaino anao ianao rehefa mamorona horonantsary LinkedIn. Iza no itenenanao? Na dia tokony hitarika ny atiny voasoratra foana amin'ny olona iray manokana aza ianao, ny fananana mpihaino manokana ao an-tsaina hoe iza no resahinao ara-bakiteny rehefa manao sary ianao dia hanampy anao hamorona atiny mahavariana kokoa.
Raha vantany vao voafaritrao hoe iza no iresahanao dia mila hafatra iray izay hanako ianao. Fantatrao izay azo antoka fa tsy hanako? Famaritana ny vokatrao na serivisinao. Mila manome olona a antony hikarakarana momba ny orinasanao alohan'ny hiresahanao azy. Mifantoha amin'ny famoronana atiny izay manabe raha tsy misy firesahana kely momba ny orinasanao.
Alohan'ny hanombohanao maka sary azy dia manontania tena hoe:
Inona no tadiavin'ny mpihaino ahy?
Inona no mampanahy ny mpihaino ahy?
Inona no tian'ny mpihaino hianarako ao amin'ny LinkedIn?
Tadidio: ny fambolena mpihaino dia tsy mijanona rehefa mamely ny 'Post'. Ianao koa dia mila manangana ny mpihaino anao any aoriana any amin'ny alàlan'ny fifandraisanao amin'ny (sy ny tena fahalianana) ny tsena kendrenao.
Mba hahazoana antoka fa mahita ny horonantsarinao ny mpihaino kendrenao dia manampy ny fifandraisana voalohany. Izahay sy ny ekipako dia manao izany amin'ny alàlan'ny famoronana lisitry ny prospect isaky ny indostria ary manasa azy ireo hiditra amin'ny tambajotranay mba hahitan'izy ireo ny atiny ao anaty sakafony. Ampahatsiahivin'izy ireo matetika ny marika sy ny sandanay nefa tsy mila mivarotra be loatra izahay.
Mamorona ny paikadin'ny horonantsary LinkedIn anao
Vonona ny manomboka mamorona horonantsary LinkedIn anao manokana hananganana marika manokana sy orinasanao? Aza hatsembohana fa mora kokoa manomboka noho ny hevitrao.
Ireto misy torohevitra vitsivitsy nianarako momba ny famoronana horonantsary LinkedIn mahomby tao anatin'ny 2 taona lasa — anisan'izany ny 10 volana namoronana horonantsary nandritra ny areti-mandringana:
Aza mieritreritra be loatra an'io. Alefaso fotsiny ny fakantsary ary tiro. Tsy mijery ny horonantsariko manokana akory aho satria hiavaka ny tenako.
Mizarà lahatsoratra amin'ny maraina. Hahita fifandraisana bebe kokoa ianao amin'ny maraina noho ny amin'ny hariva.
Manampy dikanteny. Mety mijery eo amin'ny findainy na manodidina ny hafa ny olona, ​​ka aleony mamaky toy izay mihaino. Izy io koa dia fomba fanao tsara indrindra azo idirana.
Manampia lohateny. Raha manampy dikanteny ianao dia ampio lohateny mahasarika ny sain'ny horonan-tsarinao
Makà manokana. Ny lahatsoratro izay nahavita tsara dia momba ny tsy fahombiazana, taratry ny fandrosoana sy ny fikirakirana toe-javatra sarotra.
Ataovy am-boalohany. Nanandrana ny fandefasana andian-dahatsary aho fa ny fananana zava-baovao holazaina (miaraka amin'ny lohateny sy ny sary kely hafa) dia manintona indrindra.
Ampio miaraka amin'ny kopia. Mety tsy hojeren'ny olona ny horonan-tsarinao feno, ary tsy maninona izany! Omeo azy ireo ny antony hijanonana amin'ny asanao ary hidiranao amin'ny fampidirana kopia mahavariana.
Mba hampitomboana ny marika B2B anao ary hijanonana ho mpifaninana dia mila mampiasa horonantsary LinkedIn ianao. Akimpio ny masonao dia mitsambikina ianao! Raha vao manomboka mandefa ianao dia tsy hino fa tsy nampakatra haingana.
Araho i Jackie Hermes ao amin'ny LinkedIn
Tags: b2bhoronan-tsary b2bpaikadin'ny horonantsary b2bjackie hermesLinkedInmpanaraka an'i LinkedInmarketing marketinghoronan-tsary linkinsarobidyvideo marketingtantara an-tsary
Jackie Hermes no CEO an'ny Accelity, sampan-draharaha miorina any Milwaukee izay manampy ny fanombohana rindrambaiko ho toy ny serivisy (SaaS) hahazoana fidiram-bola ary hitombo haingana, ary mpiara-manorina Herinandron'ny fandraharahana ho an'ny vehivavy. Mavitrika tokoa amin'ny LinkedIn, Jackie dia niteraka resadresaka momba ny fiainana isan'andro sy ny fanamby amin'ny fitomboan'ny orinasa bootstrapped. Jackie dia manoro ny fanombohan'ny mpianatra amin'ny alàlan'ny Ny Commons, dia mpiara-mandrindra ny Fanombohana Milwaukee EMERGE, ary mpanolo-tsaina miaraka amin'i Anjely mpamatsy vola. Ho fanampin'ny fidirana an-tsehatra matihanina, i Jackie dia reny mitaiza sy mpanamory fiaramanidina ho avy.